Merck & Co,Inc. ကထုတ်လုပ်စမ်းသပ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး COVID-19 ကာကွယ်သောက်ဆေး (Photo by Handout / Merck & Co,Inc. / AFP)
အမေရိကန်ဆေးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ Merck က သူတို့စမ်းသပ်နေတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါအတွက် သောက်ဆေးကို coronavirus ပိုး လတ်တလောကူးစက်နေသူတွေနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တာမှာ ဆေးရုံတင်ရမှုနဲ့သေဆုံးမှု ထက်ဝက်လျှော့ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မကြာခင် သူတို့ရဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါ သောက်ဆေးကို အမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာတဝန်းမှာ သုံးစွဲနိုင်ရေး ခွင့်ပြုချက်တောင်းမယ် လို့ Merck ဆေးကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။ တကယ်လို့ ခွင့်ပြုချက်ရမယ်ဆိုရင် ဒီဆေးဟာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကို ကုသနိုင်မယ့် ပထမဆုံးသောက်ဆေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
သူတို့စမ်းသပ်မှုကို ကုမ္ပဏီတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘက်မလိုက် သုံးသပ်သူရဲ့ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်တော့ မရှိသေးပါဘူး။ ကိုဗစ်ကူးစက်နေသူတွေထဲက အဝလွန်သူတွေ၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေလို စိုးရိမ်ရတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရသူတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာ သိပ်မပြင်းထန်သူ ၇၇၅ ယောက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုအတွင်း Molnupiravir လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ဆေးကို သောက်သုံးသူထဲက ရက် ၃၀ အကြာမှာ ဆေးရုံတင် ကုသမှုခံရသူနဲ့ သေဆုံးသူ ၇.၃% သာရှိပြီး အာနိသင်မပါတဲ့ဆေး သောက်သူတွေထဲက ဆေးရုံတင်ကုသမှုခံရသူနဲ့ သေဆုံးသူက ၁၄.၁% ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့စမ်းသပ်ဆေးသောက်ထားတဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာ စမ်းသပ်ကာလအတွင်း သေဆုံးသူ တယောက်မှမရှိခဲ့ဘဲ အာသိသင်မပါတဲ့ဆေး သောက်ထားတဲ့အုပ်စုထဲမှာ သေဆုံးသူ ၈ ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း Merck ဆေးကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။
Merck ကုမ်ပဏီထုတျ ကိုဗဈကုသဆေးစမျးသပျမှု ရလဒျကောငျးထှကျနေ
အမရေိကနျဆေးကုမ်ပဏီတခုဖွဈတဲ့ Merck က သူတို့စမျးသပျနတေဲ့ COVID-19 ကပျရောဂါအတှကျ သောကျဆေးကို coronavirus ပိုး လတျတလောကူးစကျနသေူတှနေဲ့ စမျးသပျခဲ့တာမှာ ဆေးရုံတငျရမှုနဲ့သဆေုံးမှု ထကျဝကျလြှော့ခနြိုငျခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။
မကွာခငျ သူတို့ရဲ့ ကိုဗဈရောဂါ သောကျဆေးကို အမရေိကနျနဲ့ ကမ်ဘာတဝနျးမှာ သုံးစှဲနိုငျရေး ခှငျ့ပွုခကျြတောငျးမယျ လို့ Merck ဆေးကုမ်ပဏီက ပွောပါတယျ။ တကယျလို့ ခှငျ့ပွုခကျြရမယျဆိုရငျ ဒီဆေးဟာ COVID-19 ကပျရောဂါကို ကုသနိုငျမယျ့ ပထမဆုံးသောကျဆေးဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
သူတို့စမျးသပျမှုကို ကုမ်ပဏီတှငျးထုတျပွနျခဲ့တာဖွဈပွီး ဘကျမလိုကျ သုံးသပျသူရဲ့ ဆနျးစဈသုံးသပျခကျြတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ကိုဗဈကူးစကျနသေူတှထေဲက အဝလှနျသူတှေ၊ ဆီးခြိုရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါရှိသူတှလေို စိုးရိမျရတယျလို့ သတျမှတျခံထားရသူတှမှော ရောဂါလက်ခဏာ သိပျမပွငျးထနျသူ ၇၇၅ ယောကျကို စမျးသပျခဲ့ပါတယျ။
စမျးသပျမှုအတှငျး Molnupiravir လို့ နာမညျပေးထားတဲ့ဆေးကို သောကျသုံးသူထဲက ရကျ ၃၀ အကွာမှာ ဆေးရုံတငျ ကုသမှုခံရသူနဲ့ သဆေုံးသူ ၇.၃% သာရှိပွီး အာနိသငျမပါတဲ့ဆေး သောကျသူတှထေဲက ဆေးရုံတငျကုသမှုခံရသူနဲ့ သဆေုံးသူက ၁၄.၁% ရှိခဲ့ပါတယျ။ သူတို့စမျးသပျဆေးသောကျထားတဲ့ အဖှဲ့ထဲမှာ စမျးသပျကာလအတှငျး သဆေုံးသူ တယောကျမှမရှိခဲ့ဘဲ အာသိသငျမပါတဲ့ဆေး သောကျထားတဲ့အုပျစုထဲမှာ သဆေုံးသူ ၈ ယောကျရှိခဲ့တယျလို့လညျး Merck ဆေးကုမ်ပဏီက ပွောပါတယျ။
#Merck #COVID #Molnupiravir #voaburmese #ကိုဗဈ #ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး